Ardayda jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso oo saaka uu u bilawaday imtixaankii ugu badmeeyey ee semisterka 2-aad ee 2010/2011. – Radio Daljir
Ardayda jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso oo saaka uu u bilawaday imtixaankii ugu badmeeyey ee semisterka 2-aad ee 2010/2011.
Boosaaso, May 25 – Ardayda jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso ayaa waxaa saaka u bilawaday imtixaankii ugu dambeeyey ee semisterka 2-aad ee sanad dugsiyeedka 2010/2011.
Gudoomiyaha jaamacada muqdisho Adam Axmed Xuseen ayaa ardayda jaamacada muqdisho ku amaanay dedaalka dheeriga ah ee ay sameeyeen, wuxuuna kula dardaarmay inay sii laba jibaaraan dedaalkooda si ay u gaaraan yoolkooda.
Ardayda maanta imtixaanka u fariistay ayaa dareenkooda ku cabiray in ay ku faraxsan yihiin halka maanta ay ka joogaan waxbarashada, ayna ugu hanweyn yihiin tacliinta sare.
Jaamacada Muqdisho, faraca Boosaaso waxaa la furay dabayaaqadii sannadkii 2008-da, halka guud ahaan Jaamacada Muqdisho oo uu saldhiggeedu yahay magaalada Xamar la furay 1997; waxay ka kooban tahay 7 kulliyadood oo leh 20 takhasus iyo barnaamijka daraasaadka sare [Master degree, iyo PhD]
Jaamacada Muqdisho waxaa ka qalin jabiyey sanadkan dufcadii 11-aad.
Axmed-naasir Maxamuud Xasan